abcnepali | » किड्नी फेल कसरी हुन्छ ? ७ महत्वपूर्ण जानकारीहरु हरेकले जानिराखौं ! किड्नी फेल कसरी हुन्छ ? ७ महत्वपूर्ण जानकारीहरु हरेकले जानिराखौं ! – abcnepali
किड्नी फेल कसरी हुन्छ ? ७ महत्वपूर्ण जानकारीहरु हरेकले जानिराखौं !
abcnepali October 15, 2019
१।किड्नीको काम के हो ?
२।किड्नी र मुटु बिचको सम्वन्ध
३।किड्नी फेलहुनाका प्रमुख कारणहरु के के हुन ?
किड्नी फेलहुनाका मुख्य कारणहरुमा मुटु, दम, श्वास, टि।बी।, सुगर, प्रेसरजस्ता रोगहरुको निदानका लागि भनेर आधुनिक औषधीहरुको बढी सेवन गर्नु हो । यी आधुनिक औषधीहरुको अल्पकालीन सेवनको विनाशकारी प्रतिक्रियाको रुपमा पनि किड्नी फेल जस्तो गम्भीर रोग हुने गरेको देखिन्छ । यी आधुनिक औषधीहरुको विषाक्त प्रभावका कारण नै किड्नी तथा पिशाबसम्बन्धी रोग उत्पन्न हुन्छ ।
४।किड्नी भनेको के हो ? यो हाम्रो शरिरमा कहाँनिर हुन्छ ?
५।किड्नी खराव हुनु भनेको के हो ?
६।नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम र यसको लक्षणहरु के के हुन ?
७।किड्नी स्टोन ९पत्थरी० , यसको लक्षण र उपचार
यदि पत्थर ६ मि।मि।भन्दा सानो छ भने त्यो पिशाबको माध्यमबाट बाहिर निकाल्न सकिन्छ । त्यसका लागि अपरेशनको आवश्यकता पर्दैन । दुखाई धेरै भयो र धेरै रगत आइरहेको छ भने चाहिं अपरेशनको जरुरत पर्दछ । १० मि।मि।भन्दा बढी मात्राको पत्थरी कहिल्यै पनि पिशाबबाट निस्कन नसक्ने हुँदा त्यसको अपरेशन गर्नुबाहेक अन्य विकल्प हुँदैन । सावधानी स्टोन नबनोस् भन्नका लागि दिनमा तीनदेखि चार लिटर पानी अनिवार्य पिउनु पर्दछ । पानीको कमी भयो भने केमिकल कन्सन्ट्रेशन बढ्दछ भने पानी बढी भयो भने कन्सन्ट्रेशन कम हुन्छ । पेशाब आउँदा रोक्नु हुन्न । पिशाब रोक्दा केमिकल कन्सन्ट्रेशन बढ्छ । किडनीको कुनै विरामी वा संक्रमण छ भने तुरुन्तै उपचार गराउनु पर्दछ किड्नीको सबै रोगहरु स्थायी हुँदैन । सही उपचारबाट खराब किड्नी ठीक हुन सक्छ ।
किड्नी फेल भनेको किड्नीले आफ्नो काम नगर्नु हो । अर्थात् शरीरमा सन्तुलन कायम नहुनु हो । यसो हुँदा शरीर सुन्निन्छ तथा ब्लडप्रेशर बढ्छ । केमिकल्स, जस्तो यूरिया, क्रिएटिनाइन, पोटेशियम बढ्न थाल्दछ । त्यसपछि मात्र थाहा हुन्छ कि किड्नीले काम गरिरहेको छैन । यसबाट यो पनि चल्दछ कि किड्नी कति खराब भएको छ भनेर । आजकाल किड्नी पेलको मुख्य कारण ब्लड प्रेसर, सुगर, पत्थरी तथा धेरै पेन किलर प्रयोग गर्नाले हुने गरेको छ । तसर्थ यसबाट बच्न जरुरी छ ताकि गम्भीर स्थिति आउनबाट बच्न सकियोस् । ताजा समाचार डटकम